We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒီချုပ် ပါလီမန် ကို တက်ပါ
ဒီချုပ် ပါလီမန် ကို တက်ပါ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ပါလီမန်ကိုတက်ပါ။ မဲဆွယ်ပွဲတွင် ပြည်သူတို့ ကိုပေးထားသော ကတိ အတိုင်း အကောင်ထည်ဖေါ်ပါ။
၉ ၀ ရွေးကောက်ပွဲ လို့မဖြစ်ပါစေနှင့်။
စကားလုံး နှစ်လုံးထက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေကို ပြင်ဆင်ရန် ဖေါ်ဆောင်ပါ လို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ် ။
U r idiot.U said Lets do together those r match,Put beside those r not match.
U have to think for country first.tereme ialser